Ushaqekile usomabhizinisi obizwe u-R250 ngomzuzu efona | isiZulu
Ushaqekile usomabhizinisi obizwe u-R250 ngomzuzu efona
Uphatheke kabi owebelwa ifoni kwasatshalaliswa izithombe zakhe enqunu
Cape Town – Uthuke woma usomabhizinisi wakuleli obizwe imali engaphezu kwa-R13 000 ngocingo alushayele ezweni laseSweden ngenxa yokuthi ufonele inombolo okubizayo ukuyifonela, nokuyinto abengayazi.
“Njengamanje ngiqhuba ibhizinisi elenza izingcingo eziningi zaphesheya. Sekukonke ngijabule kakhulu ngemali engibizwa yona futhi ngihlale ngibheka i-website yakaVodacom ukuqinisekisa ukuthi angeke ngibizwe imali enkulu,” kusho lo somabhizinisi.
OLUNYE UDABA: U-Cell C ukhale ngerandi unyusa ama-data
Noma kunjalo, lo somabhizinisi uthi uthuke woma ngesikhathi ethola incwadi yemali ayikweletayo ngemuva kokushaya ucingo eshayela inombolo yaseSweden.
“Sengike ngafonela kuleli lizwe izikhathi eziningi ngaphambilini kodwa kulesi sigameko ngabizwa u-R250 ngomzuzu nokuhlanganise ngaphezu kuka-R13 000 obizwe ku-akhawunti yami,” kuchaza lo somabhizinisi.
Lo somabhizinisi uthi ubengakaze ezwe ngale ntengo ephezulu okumele uyikhokhe uma ushayela izinombolo zaphesheya.
Uthi yize noma uVodacom ekudalula ku-website, kodwa yinto athi kumele upequlule kanzima ukuze uyithole.
Lo somabhizinisi uthi utshelwe ukuthi uzobizwa u-R3.60 ngomzuzu uma efonela eSweden ngesikhathi efonela abakwaVodacom.
Uthi kodwa izisebenzi ezibamba izingcingo zamakhasimende kwaVodacom zihlulekile ukumtshela ukuthi ngabe inombolo ayifonelayo isesigabeni sezinombolo ezibiza ngokudlulele yini.
Kumiswe abasebenzi ababili e-Unisa ngezokunukubeza ngokocansi
Inyuvesi i-University of South Africa (Unisa) ithi ikhathazekile ngezinsolo zokunukubezwa ngokocansi noma zokudwengula ezibhekene nomunye wabasebenzi besikhungo se-Early Childhood Education (UCECE).
Kuboshwe owesifazane wesithathu 'owayefunela' umfundisi Omotoso amantombazane
Kuboshwe owesifazane wesithathu ngezinsolo zokufunela umfundisi waseNigeria osolwa ngokushushumbisa abantu nokudlwengula, amantombazane.
Ukubulala okuhlobene nezepolitiki e-KZN kwakha isithombe esingesihle ngobuholi
UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu uDkt Zweli Mkhize uthi isibalo esiphezulu sokubulawa kwabantu okuhlobene nepolitiki KwaZulu-Natal kutshengisa ukuthi kunenkinga edinga ukulungiswa.